UVladimir Vladimirovich Putin uyinomboro yezombusazwe enamandla futhi unamandla aqinile. Noma yisiphi isinqumo esimweni sezwe sezombangazwe senza imizwelo eminingi yezinhlobonhlobo. Imibono eminingi yama-polar ikhona mayelana nomongameli waseRussia emazweni ahlukene: omunye umuntu uyahlonipha umholi wombuso waseRussia, abanye ngokuzonda kwakhe uwele yonke imingcele evunyelwe.
Ngokuvamile, ukugxila akugcini nje emisebenzini yezombusazwe nezombuso yomongameli. Umphakathi ukhathazekile ngokuhlukunyezwa komndeni kaVladimir Putin futhi, nakanjani, ukubukeka. Cishe ngaphansi kwe-microscope abantu bacabangela yonke imibimbi nobuso ebusweni bakhe, ngemva kwalokho ugijimela ngokushesha ukuxoxa ngeziphetho zakhe ekuxhumaneni nomphakathi.
Muva nje, abalandeli kanye nabaphikisi bomholi wombuso waseRashiya baphendukela ochwepheshe emkhakheni wokuhlinzwa ngobuhle ngombuzo: ingabe wenza ukuhlinzwa kweplastiki? Uma kunjalo, yiyiphi? Ake sizame ukuqonda lo mbuzo.
Isithombe sangaphandle sikaVladimir Putin - ipulasitiki noma yemvelo?
Ukuze uthole ukuthi u-Vladimir Putin wenza yini i-100% epulasitiki engenakwenzeka. Ayikho idatha esemthethweni kule ndaba. Kukhona amahemuhemu amaningi ngalesi sihloko, kodwa akekho omeleli bomphakathi wezokwelapha oqinisekisile noma owenqaba ulwazi mayelana ne-plasticity yomengameli.
Owodwa kuphela owakhulume ngokuqiniseka ukuthi uVladimir Putin washintsha ukubonakala kwakhe ngosizo lwezokwelapha zokwelashwa kwakungu-Alexander Pukhov, udokotela ohlinzayo waseProlyabinsk. Uzibeka njengochwepheshe ongeke kuphela anikeze ukuhlolwa kobuchwepheshe bokubukeka komongameli, kodwa futhi uyakwazi ukuqinisekisa lolu lwazi ngamaqiniso. Uthi uyazi udokotela owasebenzisa uVetin futhi wavuma ngisho nemiphumela yomsebenzi wakhe.
U-Alexander Pukhov - udokotela ohlinzayo wasePraybinsk
Ingabe lokhu kuyiqiniso ngempela, noma bekukhona olunye ulwazi "udada" okungekho owaziyo. Kodwa abalandeli bakaMengameli, ikakhulukazi abaphikisi bakhe, abaphuthelwa ithuba lokukhuluma ngemisebenzi yePulasitiki engenzeka.
Ukuvezwa noma ukungaziwa kahle? UVladimir Putin waqala nini ukusola ukuthi uphethwe ngamaplastiki?
Konke kwaqala ngo-2010, lapho uVladimir Putin ehambela e-Ukraine ngokusemthethweni. Khona-ke abezindaba baqala ukukhuluma ngokuthi ubuso bomholi waseRussia babenemivimbo ebonakalayo ngaphansi kwamehlo akhe. Babezitholakala ngokulinganayo, ngakho-ke ukucabanga ukuthi kwakuyi-traumatic ngesikhathi sokuqeqesha, ayikwazanga ukumelana nokugxeka. Yebo, futhi ngesimo sawo, ukuvuvukala okumnyama kufana ne-edema, kunokuba i-hematoma ngemuva kokushaya okushayayo. Yilawa ma-edemas abangela ukusabela okubudlova kumaphephandaba.
Kwabe sekuthi okhulumela uNgqongqoshe wabe esethi uVladimir Putin ube nesimiso esimatasa kakhulu, imibuthano emnyama kakhulu ngaphansi kwamehlo kwakuwumphumela wokukhathala nokusebenza ngokweqile. Kodwa le nguqulo nayo iphikisiwe yizintatheli ze-ubiquitous. Abazange bahluleke ukubona ukuthi izibhamu ngaphansi kwamehlo emva komsebenzi omatasa futhi okhandlayo wokusebenza zihlukile emibuthaneni emnyama ebusweni bukaVladimir Putin - zihlelwe ngokuhlukile.
Abanye "abafake izinhlanzi" benza ukucabanga ukuthi ukuvuvukala kwakuwumphumela wamagciwane we-Botox. Umbono ofanayo waboniswa udokotela ohlinzayo wasePlastiki uRostislav Valikhnovsky, owake wenza ukuhlinzekwa kwePlastiki kaViktor Yushchenko ngesikhathi esisodwa.
URostislav Valikhnovsky - udokotela ohlinzayo wasepulasitiki
Uqinisekisile ukucabanga kwakhe ngokuthi indawo, ukuma nombala wezinxephezelo kufana nalawo miphumela evela ngemuva kokungenelela kwemithi yokwenza ubuciko. Ngaphezu kwalokho, ukutholakala kweBotox kwakhulunywe futhi akucaci ngokucacile ubuso bukaVladimir Putin. UValikhnovsky uthe futhi ngaleso sikhathi izijovo ze-botulinum toxin ekhanda leRussian Federation zenziwe unyaka nonyaka.
Kuthiwa imisebenzi yaseplastiki kaVladimir Putin - izithombe ngaphambi nangemva
Ngo-2011, kwakukhona ukuqhuma okusha kwamahemuhemu nokuhleba mayelana nokushintsha kokubonakala kukaVladimir Putin ngemuva kokuvela enkomfeni yeqembu elithi "United Kingdom". Izingxoxo ezinamandla azivezanga nje izitatimende mayelana nokuxoshwa kwezombangazwe, kodwa futhi nesithombe esisha sikaPutin. Ukubukeka okushintshiwe kukaNdunankulu kwabangela izingxabano eziningi.
Iqiniso liwukuthi ubuso bakhe babuqabula ngokuphawulekayo, kwakungekho izimpawu zokukhathala. Ayikho imibimbi, izikhwama nemivimbo ngaphansi kwamehlo. Isikhumba sakhanyisa ngokusha kanye nempilo.
Ochwepheshe emkhakheni wezinhlinzeko zepulasitiki ngokushesha babike izinguquko ngokubukeka nemiphumela ye-blepharoplasty ne-injection injection. Kodwa i-gurus yemithi yokwenza ubuhle ayizange ime lapho. Basola ukuthi angeke kube khona ukuphathwa kabi kweplastiki, okungukuthi:
Amafayili endaweni ye-cheekbones;
Imishanguzo ye-Botox endaweni ephakathi kwamashiya nasendaweni yokwakhiwa "kwezinyawo zezinkukhu".
Kukhona ngisho nokusikisela ukuthi izindebe nazo zaqondiswa yi-botox efanayo. Uhlobo lwabalandeli bomengameli lwalungeke lwenzeke ukuthi wenza intambo ebusweni kanye nokufaka izimpande ezingxenyeni ezingenalutho zomhlathi. Esithombeni somongameli waseRussia, azikho izindlela zokungenelela okunjalo kuphrofayli.
Kusukela ngaleso sikhathi, ingxoxo yombuzo - "kungakhathaliseki ukuthi uPutin wenza ukuhlinzekwa kwepulasitiki noma cha" uyaqhubeka. Futhi hhayi kuphela eRussia, kodwa nakwamanye amazwe amaningi.
E-UK, lapho bengabufihli ukuphikisana kwabo ekhanda likaRussian Federation, bajabulele imininingwane yalesi sihloko ngokukhanya okubi - bathi, imisebenzi ayiphumelelanga ngokuphelele.
Wonke umuntu uyazi ukuthi abanye baseBrithani bavame ukuzondela umongameli waseRussia njengamazwana acasulayo ekuqondeni kwakhe. Ngokuvamile ukukhuluma kwabo ngendlela engafanele ngokubukeka kukaPutin kuthola tinge yezepolotiki ecacile futhi engavumelekile.
Abahlinzayo bama-plastic ase-Ukraine bavame ukubhekisela esihlokweni sokuhlinzwa kwepulasitiki komongameli waseRussia. Ngokwesibonelo, ngoNovemba 2017, ozobhapathizwa wezesayensi yezokwelapha uPavel Denischuk wenza "isitatimende sokuthakazelisa" - uPutin wayenza amajwabu aseplastiki. Ngaphezu kwalokho, usosayensi wanezela ukuthi umongameli waseRussia uhlale elungisa amajwabu angenhla nangaphansi ngesizo lomuthi wepulasitiki, okungukuthi, ama-Botox injection.
UVavel Denischuk - udokotela ohlinzayo we-plastic plastic
Kungakhathaliseki ukuthi u-Denischuk wenze lesi sitatimende ngaphandle kwezinhloso zobuchwepheshe noma wayeholwa ezinye izinjongo aziwa. Kodwa isiphetho yilezi: ama-plastiki angase abe yiVladimir Putin anesithakazelo emphakathini emazweni amaningi.
Siphakamisa ukuthi uhlole isithombe sikaVladimir Putin ngokwakho ngaphambi nangemva kwamaplastiki. Babonisa umongameli waseRussia ngezikhathi ezihlukahlukene empilweni yakhe.
Ukuqagela ukuthi ubani esithombeni? Uyathandana namantombazane futhi ahloniphe amadoda
Ukuphila okuyimfihlo nokusobala kuka-Alina Kabaeva
Umngane wakho omkhulu kunomsakazo wezinkanyezi
I-Strabismus isifo somntwana omncane
Izimo ezithakazelisayo nezingavamile ngoFebhuwari 23 zenkampani
Ukupheka kwegolide kwezempilo nokuphila isikhathi eside
Uhambo oluya epharadesi elahlekile: ama-Seychelles amahle kakhulu
Semifredo nge-lime kanye nemango
UDejavu: U-Anna Kalashnikova waphinde waba nesisu "sokukhulelwa"
Indlela yokufihla ukuphinga
I-salsa nobhontshisi nge-chips
Ushizi casserole nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
AmaHedgehogs kuhhavini nge-sauce omuncu omuncu